Siddeedda Sare ee Faa'idada Isticmaalka GitHub - Khabiirka Cimilada
Haddii aad tahay barnaamij horumariye ama barnaamijka, markaas waa inaad maqashay GitHub. Adeeggan martigelintu wuxuu leeyahay sifooyin aan caadi ahayn sida qalabka maaraynta shaqada iyo shabakad ku salaysan shabakad ku saleysan.
Waxay diyaarisaa mashaariicda koodhka (source code) ee luuqadaha barnaamijyada badan oo la socdo isbeddelka isbeddelada la sameeyey. Waxa kale oo leh lahaansho wada shaqeyn sida wikis iyo raad raac qalin. Faa'iidooyinka ugu weyn ee isticmaalka GitHub ayaa lagala hadlay hoos - oxycontin 80mg for sale.
1. Qorshayaasha kala duwan ee la heli karo:
GitHub wuxuu bixiyaa qorshooyin asaasiga ah iyo kuwa sare waxaana loo isticmaalaa xirfadlayaasha iyo kuwa aan xirfadlayaasha ahayn. Waxaad dooran kartaa qorshe ku salaysan shuruudahaaga iyo martigaliyaasha mashaariicda barnaamijka furan ee furan oo si haboon u socda. GitHub waxa uu sheeganayaa in ka badan 15 milyan oo qof oo isticmaala firfircoon adduunka oo dhan iyo in ka badan 55 milyan oo mawaadiniin ah, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah meeraha ugu weyn.
Guud ahaan, waxaad ka qaadi kartaa mashaariic kala duwan oo furan sida waraaqo qotodheer oo aad ka hesho jawaabcelin khubarada. Barnaamijkani wuxuu kuu fududeynayaa inaad lafagurto tayada waxyaabaha aad ka tirtirtay.
3. Muuji shaqadaada:
Miyaad dooneysaa inaad soo bandhigto shaqadaada oo aad soo jiidato macaamiil badan? GitHub waa qalabka ugu kalsoonida badan uguna wanaagsan ee arrimahan; Iyadoo, horumariyayaashu waxay soo bandhigi karaan hawshooda oo ay la shaqeeyaan shaqaale qorayaal iyo macaamiil badan oo ka yimid dhammaan qaybaha dunida.
4. Abuurso xisaabtaada si fudud:
Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato GitHub, waa inaad sameysid koonto. Si kastaba ha noqotee, bakhaarrada dadweynaha waa la soo dejin karaa oo la arki karaa iyada oo aan xisaab lahayn. Adigoo isticmaalaya calaamadda diiwaan gashan, waxaad awoodi doontaa inaad maamulto, kala hadashid oo aad sameysid bakhaaro kala duwan, u soo gudbisid tabarradaada iyo dib-u-eegista koodhka.
5. Shaqooyinka shabakada bulshada:
GitHub wuxuu bixiyaa hawlo bulsheed weyn sida wikis, taageerayaal, jecel, saamiyada, faallooyinka, iyo quudinta. Shabakadda gaarka ah ee shabakadda bulshada ayaa kaa caawineysa inaad muujiso shaqadaada oo aad kuxiiso mawduucyada xiisadaha.
Markdown wuxuu noo ogolaanayaa in aan isticmaalno tifaftiraha qoraalka fudud si loo saxo ama u qoro dukumiintiyo kala duwan. Si ka duwan noocyada kale ee caadiga ah, ma aha oo keliya qaababkaaga qaab shaxadeysan laakiin sidoo kale waxay u kaydisaa xogta u gaarka ah ee loo adeegsado isticmaalka offline.
7. Isbeddelka isbeddelada noocyada kala duwan:
Marka dad kala duwan ay ka wada shaqeeyaan mashruuca, ma fududa in lala socdo wax kasta. Laakiin waxaad la socotaa GitHub, waxaad isbarbar dhigi kartaa isbeddelada iyo diiwaanka dib u eegista. Software wuxuu u shaqeeyaa sida Google Drive iyo Microsoft Word; oo leh GitHub, waxaad heli kartaa noocyada kala duwan ee faylka oo aan u baahnayn inaad barato luuqadaha barnaamijka sare ee dhammaan.
8. Wareegyo kala duwan:
Mid ka mid ah sifooyinka ugu kala duwan ee GitHub waa in uu ku habboon yahay Google Cloud iyo Amazon. Sidoo kale, barnaamijkani wuxuu sharaxaad ka bixinayaa eraybixinta in ka badan 150 luuqadood oo barnaamij ah iyo fududeynaya shaqadaada.